zimbabwe government on News24
LAST UPDATED: 2013-05-26, 09:31
Revenue crunch may shut Zimbabwe govt
Zimbabwe's Finance Minister, Tendai Biti, says the government may face a shutdown because of a lack of funds from the diamond industry.
Implats, Zim dispute deepens
Implats denies Zimplats offer
Zuma positive about Zimbabwe
President Jacob Zuma has expressed optimism about the situation in Zimbabwe, despite ongoing negotiations on outstanding issues.
US shows no sign of lifting Zim sanctions
Tsvangirai hails Bennett acquittal
Bennett faces new stumbling block
Tsvangirai calls for end to stalemate
Zimbabwean PM Morgan Tsvangirai has called for a speedy resolution of major disagreements stalling a power-sharing government with his long-time rival, President Robert Mugabe.
Mugabe snubs US Congressman
The US Embassy says Congressman Donald Payne is ending a two-day trip to Zimbabwe without the audience he sought with President Robert Mugabe. Mugabe names rights groups
Sanctions must go – Mugabe
Zim diamond probe hits snag
Lawmakers investigating alleged illegal diamond mining in eastern Zimbabwe say police stopped them touring the diamond workings. Zim cops grab diamonds from bank
Mugabe names rights groups
Zimbabwean President Robert Mugabe has sworn in members of a Human Rights and Electoral Commission, expected to steer reforms towards free and fair elections.
Zimbabwe’s President Robert Mugabe has ruled out any concessions in ongoing negotiations with PM Morgan Tsvangirai’s party until sanctions are removed. Zuma calls for end to Zim sanctions
Zimbabwe's leaders have agreed to a "package of measures" to help rescue its fragile unity government, President Jacob Zuma has said.
Zuma 'encouraged' by Zim talks Zim leaders happy with Zuma
Zim rivals under fresh pressure Zuma 'encouraged' by Zim talks
South African President Jacob Zuma’s first day talks with Zimbabwe’s rival leaders was “encouraging”, his spokesperson says ahead of further discussions on the fragile unity government.
Zim leaders happy with Zuma
Pressure on for new Zim unity
Zim President Robert Mugabe and Prime Minister Morgan Tsvangirai have expressed satisfaction with the progress made in talks aimed at salvaging their unity government.
Zuma heads to Zim to mediate MDC: SA should help Zim govt
SA President Jacob Zuma has begun talks with Zimbabwean President Robert Mugabe and PM Morgan Tsvangirai, amid growing pressure for the country to move toward new elections.
Zuma in Zimbabwe to mediate MDC: SA should help Zim govt
Zuma heads to Zim to mediate Zim's democracy insufficient - EU
The EU says Zimbabwe has made “insufficient” moves towards democracy, a year after a power sharing pact was signed to put an end to President Robert Mugabe’s autocratic rule. Zim sanctions must go – Mugabe
Reform delay 'aiding Zim abuse'
EU extends Zim sanctions
The MDC says South Africa should intervene in a deadlock that has hampered governance in Zimbabwe after a spokesperson for Morgan Tsvangirai's party said Zanu-PF was blocking progress.
MDC wants fresh elections
Deep-seated mistrust and political bickering are hampering Zimbabwe’s recovery as the country’s coalition government turns one-year-old. A year into Zim’s coalition
A year after the heady inauguration of Zimbabwe’s power-sharing government, Zimbabweans want to know what changes it (new government) has effected.
Zim's Biti lashes out at Zanu-PF
Lift sanctions first - Zanu-PF
Zimbabwe President Robert Mugabe’s Zanu-PF will not make concessions in talks with its partners in the unity government until sanctions imposed by the West are lifted, the party says. Mugabe's view on sanctions
SA urges Zim to act on crisis
South Africa is growing impatient with Zimbabwe, urging leaders in its troubled northern neighbour to resolve political tensions in time for elections expected next year.
Zim constitution on schedule
'Some progress' in Zim talks
Mugabe sees progress in Zim
Zim's rivals getting along
Zimbabwean President Robert Mugabe and his rival-turned premier have held a collegial end-of-year press conference, but announced no resolution of issues that have undermined their partnership. Mugabe sees progress in Zim
Great progress in Zim - UN
Progress in Zim - Zuma team
President Robert Mugabe has referred to MDC's Roy Bennett as an "offspring of a settler" who is not Zimbabwean, a remark likely to strain the country's unity government. 'Zanu-PF weak, divided'
Mugabe bemoans factionalism
Come back home - Tsvangirai
Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai wants his countrymen to return home to take part in the reconstruction of the country. PM says progress in talks
PM warns over unity deal
A new team of SA mediators have held their first talks with Zimbabwe President Robert Mugabe in a fresh bid to ease tensions within the strained unity government, a report says.
A team of SA officials has left for Zimbabwe where it will facilitate talks on the Zimbabwean power-sharing agreement.
Implement reforms first - Brown
British PM Gordon Brown has held out the prospect that Zimbabwe could be re-admitted to the Commonwealth in 2011 if it pushes ahead with reforms. Zim gets 30-day deadline
Leaders to meet on Zim crisis
Zim to audit state employees
Zimbabwe's government is set to audit its workers following criticism that thousands of people who are not state employees are receiving salaries.
Zim PM fires 4 ministers
Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai has fired four top Cabinet ministers, saying they failed a performance review after 16 months of troubled power sharing.
Zim slashes media licensing fees
Zimbabwe's government has reduced its registration requirements for media organisations and journalists operating in the country in a bid to reform its harsh media laws.
Zim's company grab law to stay
Just days after he was barred by the North Gauteng High Court from singing "shoot the boer" Julius Malema has sung it loud and clear - in Zimbabwe. Malema death threat shocks ANC
Zimbabwean party, the Movement for Democratic Change, has expressed anger at Julius Malema's decision to only meet with Zanu-PF leadership, saying that it "sends the wrong signal". Malema to study Zim nationalisation
Zimbabwe's political parties have failed to meet a deadline set by SA's Jacob Zuma to resolve the country's power-sharing dispute, a minister has said.
Zuma calls for end to Zim sanctions
Zim paper apologises to Queen Zuma says Zim talks fruitful
Progress in Zimbabwe could be reversed at any time due to the violence and intimidation blocking free and fair elections, a report by British lawmakers says.
Zim rivals under fresh pressure Zim's democracy insufficient - EU
Zim back to brink of food crisis
Zim rivals under fresh pressure
Zimbabwe’s rival leaders face fresh pressure to mend their differences and push toward new elections as SA President Jacob Zuma leads talks on the fragile unity government.
Zuma 'encouraged' by Zim talks Zuma meets Zim leaders
Zanu-PF is holding out little prospect for an imminent breakthrough in Zimbabwe talks, saying lower-level talks were already planned for next week.
Zuma heads to Zim to mediate Zim leaders happy with Zuma
Mugabe mum over Zuma meeting
SA leader Jacob Zuma has met Zimbabwean President Robert Mugabe and PM Morgan Tsvangirai in an attempt to resolve the country’s decade-long political crisis.
Zuma in Zimbabwe to mediate
President Jacob Zuma has begun a crucial two-day visit to Zimbabwe, in his first official trip as chief mediator to resolve tension in that country. Zuma to assess Zim unity govt pact
Zuma heads to Zim to mediate EU extends Zim sanctions
The EU has extended sanctions on Zimbabwe for another 12 months, citing a lack of progress in implementing a power-sharing accord. Mugabe's view on sanctions
Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai's party has called for fresh elections if the current logjam in talks between rival factions persisted.
Fresh elections are the only way to a lasting solution for Zimbabwe, the Movement for Democratic Change (MDC) in South Africa says.
A year into Zim’s coalition
Uphold the law - Zim judge Zim's Biti lashes out at Zanu-PF
The secretary-general of Zimbabwe’s MDC Tendai Biti has lashed out at Zanu-PF for ‘waging war’ against the democratic reform process, this in a most outspoken attack since the formation of the country’s unity government.
PM resists pressure for polls
Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai has resisted pressure for elections next year, in opposition to calls made by SA President Jacob Zuma. SA urges Zim to act on crisis
The committee redrafting Zimbabwe's constitution has said the process was on course despite earlier problems caused by lack of funds.
Zimbabwe's rival factions say they have reached two agreements after a year of impasse and disappointment.
A top UN official has praised "great progress" in easing Zimbabwe's humanitarian crisis but urged donors to continue supporting the country's recovery from its economic freefall.
'Zim will recover from crisis'
UN: Zim child mortality up 20%
PM says progress in talks
Zimbabwean prime minister Morgan Tsvangirai says there has been progress in talks between the country's two political parties.
Zimbabwe PM Morgan Tsvangirai has complained that his unity government deal with President Mugabe is not being implemented and has appealed for SA help.
'Let Zim back in Commonwealth'
Zimbabwe's Prime Minister Morgan Tsvangirai says he is thankful for South African efforts to rescue his country's coalition government.
Tsvangirai to brief Gaddafi
Prime Minister Morgan Tsvangirai has left Zimbabwe for Morocco and Libya, the current AU chair, where he will brief Muammar Gaddafi on the unity government.
SA to evaluate Zim progress
Tsvangirai ends Zim govt boycott
Tsvangirai must vouch for Zim
Zimbabwe's prime minister, Morgan Tsvangirai, faces a tricky task in persuading US President Barack Obama to lift restrictions on aid to his beleaguered country.
Tsvangirai urges US support
Obama to meet Tsvangirai Tsvangirai to visit Brown